Ekpee Ndị Bụ́ Atụrụ na Ewu Ikpe (Matiu 25:​31-⁠46) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
JIZỌS EMEE IHE ATỤ GBASARA ATỤRỤ NA EWU
Jizọs ka mepụụrụ ndị na-eso ụzọ ya ihe atụ banyere ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke na ihe atụ banyere talent. Olee ihe ikpeazụ ọ gwara ndịozi ya iji zaa ha ajụjụ ha jụrụ ya gbasara ihe a ga-eji ama oge ọnụnọ ya na ọgwụgwụ nke usoro ihe a? Ihe ikpeazụ o ji zaa ha ajụjụ ha bụ imere ha ihe atụ banyere atụrụ na ewu.
Otú a ka Jizọs si malite ihe atụ ahụ. Ọ sịrị: “Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa n’ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi ya niile, mgbe ahụ ka ọ ga-anọkwasị n’ocheeze ya dị ebube.” (Matiu 25:31) Jizọs ji ihe a o kwuru gosi na ọ bụ ya bụ isi n’ihe atụ a. Ọ na-akpọkarị onwe ya “Nwa nke mmadụ.”—Matiu 8:20; 9:6; 20:18, 28.
Olee mgbe ihe atụ a ga-emezu? Ọ bụ mgbe Jizọs “ga-abịa n’ebube ya,” ya na ndị mmụọ ozi ya, ma nọkwasị “n’ocheeze ya dị ebube.” Jizọs ekwubuola na ‘Nwa nke mmadụ ga-abịa n’ígwé ojii nke eluigwe n’ike na ebube dị ukwuu,’ ya na ndị mmụọ ozi ya. Olee mgbe ọ ga-abịa? Jizọs sịrị na ọ bụ “ozugbo mkpagbu nke ụbọchị ndị ahụ gasịrị.” (Matiu 24:29-31; Mak 13:26, 27; Luk 21:27) N’ihi ya, ihe atụ a ga-emezu n’ọdịnihu, mgbe Jizọs ga-abịa n’ebube ya. Olee ihe ọ ga-eme ma ọ bịa?
Jizọs kwuru, sị: “Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa . . . , a ga-emekwa ka mba niile zukọta n’ihu ya, ọ ga-ekewapụkwa ndị mmadụ n’ebe ibe ha nọ, dị nnọọ ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ n’ebe ewu nọ. Ọ ga-edebe atụrụ n’aka nri ya, ma debe ewu n’aka ekpe ya.”—Matiu 25:31-33.
Jizọs kwuru banyere ndị ahụ bụ́ atụrụ ọ ga-edebe n’aka nri ya, sị: “Mgbe ahụ, eze ahụ ga-asị ndị nọ n’aka nri ya, ‘Bịanụ, unu ndị Nna m gọziri agọzi, ketanụ alaeze ahụ a kwadebeere unu malite mgbe a tọrọ ntọala ụwa.’” (Matiu 25:34) Gịnị mere Eze ahụ ga-eji meere ndị a bụ́ atụrụ ihe ọma dị otú a?
Eze ahụ kwuru, sị: “Agụụ gụrụ m, unu wee nye m ihe ka m rie; akpịrị kpọrọ m nkụ, unu wee nye m ihe ka m ṅụọ. Abụ m onye ọbịa, unu wee nabata m nke ọma; agba m ọtọ, unu wee yiwe m uwe. Adara m ọrịa, unu wee lekọta m. Anọ m n’ụlọ mkpọrọ, unu wee bịakwute m.” Mgbe ndị a bụ́ atụrụ, ya bụ, “ndị ezi omume,” jụrụ ya otú ha si meere ya ihe ọma ndị ahụ, ọ zara ha, sị: “Ihe niile unu meere otu n’ime ndị kasị nta n’ime ụmụnna m ndị a, ọ bụ m ka unu meere ya.” (Matiu 25:35, 36, 40, 46) Ọ bụghị n’eluigwe ka ha nọ meere ụmụnna Kraịst ihe ọma ndị ahụ n’ihi na e nweghị ndị ọrịa ma ọ bụ ndị agụụ na-agụ n’eluigwe. Ọ bụ n’ụwa ebe a ka ha meere ya ụmụnna Kraịst.
Oleekwanụ gbasara ndị ahụ bụ́ ewu nọ n’aka ekpe ya? Jizọs kwuru, sị: “Mgbe ahụ, [Eze ahụ] ga-asị ndị nọ n’aka ekpe ya, ‘Sinụ n’ebe m nọ pụọ, unu ndị a bụrụ ọnụ, banyenụ n’ọkụ ebighị ebi nke a kwadebeere Ekwensu na ndị mmụọ ozi ya. N’ihi na agụụ gụrụ m, ma ọ dịghị ihe unu nyere m ka m rie, akpịrị kpọkwara m nkụ, ma ọ dịghị ihe unu nyere m ka m ṅụọ. Abụ m onye ọbịa, ma unu anabataghị m nke ọma; agba m ọtọ, ma unu eyiweghị m uwe; arịara m ọrịa, nọrọkwa n’ụlọ mkpọrọ, ma unu elekọtaghị m.’” (Matiu 25:41-43) Ikpe a a mara ndị bụ́ ewu kwesịrị ekwesị n’ihi na ha emereghị ụmụnna Kraịst nọ n’ụwa ihe ọma, bụ́kwanụ ihe ha kwesịrị imere ha.
Ndịozi ahụ ghọtara na mgbe a ga-ekpe ikpe a, e nwere ndị ga-eketa ndụ ebighị ebi, nweekwa ndị ga-anwụ ọnwụ ebighị ebi. Jizọs gwara ha, sị: “Mgbe ahụ, [Eze ahụ ga-asị ndị bụ́ ewu], ‘N’ezie, ana m asị unu, ebe unu na-emeghịrị ya otu n’ime ndị a kasị nta, unu emeghịrị m ya.’ Ndị a ga-anwụ ọnwụ ebighị ebi, ma ndị ezi omume ga-enweta ndụ ebighị ebi.”—Matiu 25:45, 46.
Ihe Jizọs zara ndịozi ya n’ajụjụ ha jụrụ ya mere ka ha nwee ọtụtụ ihe ha ga-echebara echiche. Ọ ga-emekwa ka ha lebara otú ha si akpa àgwà anya.
N’ihe atụ Jizọs mere gbasara atụrụ na ewu, ònye bụ “eze ahụ”? Olee mgbe ihe atụ a ga-emezu?
Gịnị mere na Jizọs agaghị ama ndị bụ́ atụrụ ikpe?
Olee ihe mere a ga-eji kpee ụfọdụ ndị ikpe na ha bụ ewu? Olee ihe ga-eme ndị bụ́ atụrụ na ndị bụ́ ewu?
Olee otú ndị ahụ Kraịst ga-akpọ atụrụ si na-akwado ụmụnna ya?